ဓမ္မမျိုးစေ့ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဓမ္မမျိုးစေ့ (Dharma Seed) သည် ခေတ်ကာလ ဘာသာစကားများဖြင့် ဟောပြောထားကြသည့် ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာ သင်ကြားပြသမှုများကို ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ မျှဝေခြင်း လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်နေသည့် အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။
ဓမ္မမျိုးစေ့ကို ၁၉၈၃ ခုနှစ်တွင် မက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ ဘာရီ (Barre) ရှိ ဝိပဿနာတရားအဖွဲ့ (IMS) ၌ လုပ်အားပေးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ဘီဟာမီတန် (Bill Hamilton) က စတင်ခဲ့သည်။ ဘီဟာမီတန်သည် IMS တွင် ပြုလုပ်သည့် ဓမ္မစကားဝိုင်း (Dhamma Talks) မှ တရားပြသမှုများနှင့် ဟောပြာမှုများကို တိပ်ခွေဖြင့် ဖမ်းယူကာ စတင်ခဲ့သည်။ သူ၏ သေးငယ်သည့် ဤအလုပ်သည် တဖြည်းဖြည်း အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသို့ တရားပြသမှုတိပ်ခွေများကို ရောင်းချခြင်းဖြင့် ဓမ္မမျိုးစေ့စာကြည့်တိုက်ကို စတင်ခဲ့သည်။ နဂိုမူလ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရိုးစင်းစွာပင် “ဓမ္မတရားများကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် မျှဝေရန်” ဖြစ်သည်။ ယခုအချိန်တွင် ဓမ္မမျိုးစေ့သည် သင်ကြားပြသမှုများကို လှူဒါန်းမှုဒါနပြုသည့်အပေါ်တွင် မူတည်ကာ ပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။
နဂိုမူလက တိပ်ခွေများသည် တရားဓမ္မစကားဝိုင်းတွင် ပြုလုပ်နေသည့်အချိန်တွင် ခန်းမတွင် ရှိမနေကြသည့် လူအများအတွက် ဖြစ်ပြီး၊ ထိုသူများအား နောင်အခါတွင် ကြီးမားသည့် တန်ဖိုးများရရှိစေရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၄ ခုနှစ်တွင် စီမံကိန်းကို အကျိုးအမြတ်မယူသည့် ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကာ ဓမ္မမျိုးစေ့တိပ်ခွေစာကြည့်တိုက် ဖြစ်လာခဲ့၍ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဓမ္မမျိုးစေ့မော်ကွန်းတိုက်၏ ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ ဂျူဒီဖီးလစ် (Judy Phillips) က “ကျွန်တော်တို့ ဒါကို လုပ်ခဲ့တာ အခုဆို ဆယ့်ခြောက်နှစ်နီးပါး ရှိခဲ့ပါပြီ။ ကျွန်တော်က မူလဒါရိုက်တာတစ်ဦးလည်း ဖြစ်ကာ ဒီဟာကို စကတည်းက ပါဝင်ခဲ့တာပါ” ဟု ပြောခဲ့သည်။
၁၉၈၅ ခုနှစ်တွင် ဓမ္မမျိုးစေ့တိပ်ခွေစာကြည့်တိုက်သည် အနောက်နိုင်ငံသား ဘာသာရေးသမားများကြားတွင် မကောင်းသတင်းကျော်ကြားခဲ့သည်။ ဓမ္မမျိုးစေ့သည် မိမိကိုယ်ကိုယ် ပြောင်းလဲမည့် ရည်ရွယ်ချက်တွင် အရည်အသွေးကောင်းသည့် ကတ်ဆက်ခွေများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသည့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးလာသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်ခဲ့သည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် ထုတ်ဝေသည့် ယောဂဂျာနယ်တွင် သူ၏ စာဖတ်ပရိသတ်များအား ကတ်ဆက်တိပ်ခွေများကို ရယူ၍ အကျိုးရှိစွာဖြင့် အိမ်၊ ကား သို့မဟုတ် သီချင်းနားထောင်သည့် စက်များတွင် ထားရှိကာ အသုံးချရန် တိုက်တွန်းထားသည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု ကြာပြီးနောက်တွင် အမေရိကန်၌ ဝိပဿနာပျံ့နှံ့မှုသည် ကယ်လီဖိုးနီးယား၊ နယူးယောက်နှင့် မက်ဆာချူးဆက်တို့တွင် ကြီးမားစွာ နေရာယူခဲ့သည်။
အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏ အမည်နာမကို ဓမ္မမျိုးစေ့ဟူသော အယူအဆမှ ရယူထားသည်။ “မျိုးစေ့သည် ဝိပဿနာအာရုံ၏ တုံ့ပြန်မှုဖြစ်သည်။
ဓမ္မမျိုးစေ့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ စင်တာပေါင်း ၄၀ ကျော်တွင် ပြုလုပ်သည့် ဓမ္မစကားဝိုင်းများမှ အသံဖိုင်များ ရရှိသည်။
↑ About Us။ Dharma Seed's Official Website။ Dharma Seed။ 25 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Van Dusen၊ Caitlin (Winter 2002)။ Dana Works: The Dharma Seed Archival Center။ Tricycle Magazine။ 25 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Van Dusen, Caitlin (2002). "Dana Works: The Dharma Seed Archival Center". Tricycle 12. Buddhist Ray.
↑ "Dharma as Dana" (2000). Insight Journal 15 (Fall).
↑ ၅.၀ ၅.၁ ၅.၂ Roggenbuck, Peggy (May 1985). "Replacing 'Old Tapes' with Timeless Wisdom". Yoga Journal (62): 59–60.
↑ Tanaka (1998)။ Prebish, Charles S.; Tanaka, Kenneth K. (eds.)။ The faces of Buddhism in America။ University of California Press။ p. 178။ ISBN 978-0-520-21301-2။
↑ Kamalashila (1996)။ Meditation: The Buddhist Way of Tranquillity and Insight။ Windhorse Publications။ pp. 186။ ISBN 978-1-899579-05-1။
↑ Dharma Center Talks။ Dharma Seed's Official Website။ Dharma Seed။ 25 February 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဓမ္မမျိုးစေ့&oldid=663026" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ ဇူလိုင် ၂၀၂၁၊ ၀၂:၅၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။